» नौ लाख लूट प्रकरणमा नयाँ तथ्यः डलर छ भनेको झोलाभित्र कागजका बिटा मात्र !
नौ लाख लूट प्रकरणमा नयाँ तथ्यः डलर छ भनेको झोलाभित्र कागजका बिटा मात्र !
१ चैत्र २०७६, शनिबार २०:३२
चितवनको खैरहनीमा दिनदहाडै ९ लाख रुपैयाँ लुटिएको भन्ने घटनामा नयाँ तथ्य फेला परेको छ । खैरहनी –८ पर्सा बजार नजिक ९ लाख रुपैयाँ लुटिएको नभई ठगी भएको खुलासा भएको हो ।
घर्तीले ९ लाख नेपाली रुपैयासँग २७ हजार अमेरिकी डलर साट्ने योजनाअनुसार बैंकबाट रकम निकाली पर्साबजार पुगेका थिए । अनिल राई नाम गरेका व्यक्तिले घर्तीको साथबाट ९ लाख रुपैयाँ लिएर २७ हजार डलर रहेको भन्दै एउटा झोला उनलाई दिएका थिए । तर, उक्त झोलाभित्र अमेरिकी डलरको सट्टा कागजका बिटा मात्रै रहेको फेला परेको हो ।
डलर रहेको भनिएको झोलामा कागज मात्रै देखेपछि घर्तीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । जग्गा खरिदको लागि ल्याएको रकम लु’टिएको भन्दै उनले प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरी घटनाको अनुसन्धान र लुटेराको खोजीमा जुटेको थियो ।
घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको र ठगी गर्नेहरुको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीको भनाई छ ।स्रोतः स्वदेशनेपाल